Mgbe ya na di na nwunye na-azụ ahịa nọ n’obodo na-ezukọ, otu n’ime ha kwuru banyere otú ume ọ ga-esi malite n’ụbọchị - ọ na-eteta ụra n’oge na ịnyịnya ígwè 20+. M na-agba ịnyịnya ọtụtụ ... M hụrụ n'anya ịnyịnya ígwè (ọ bụ ezie na ejighị m n'aka La-Z-Boy na-eme oche igwe kwụ otu ebe). Anyị kwara njakịrị na anyị chọrọ ụzọ iji wulite kọmpụta na pedal. Chọpụta ihe, enwere ihe yiri ya! Tony Little dị n’elu ya na PC Gamer Bike! Nke ahụ abụghị azịza ya n'ezie, agbanyeghị, ọ bụ? Weta mmega ahụ m n'ọrụ m maka na ọrụ m na-eri ndụ m niile? Echeghị m.
Emechaa taa, mụ na ya na-akparịta ụka Julie na Julie bidoro ikwuputa ebe nile di egwu maka egwu, nka, na egwuri egwu. M na-abịa na 5 afọ na Indianapolis na m bụ ihere na m enwetụbeghị ahụmahụ ọ bụla nke nnukwu ihe o nwere. Ka Julie gbadara ndepụta… Yat si, White River State Park, Eagle Creek, The Verizon Ampitheatre, na Eiteljorg Museum, The Indianapolis Zoo, The Indiana State Museum, na a ton ọzọ… M na-adịghị ihe ọ bụla. Agara m ebe ụmụaka Museum, ụfọdụ AAA Indian si baseball egwuregwu, a di na nwunye Pacers egwuregwu na a di na nwunye Colts egwuregwu… ma na ọ bụ ya.
N’ozi m iwulite ọmarịcha blọọgụ ma bụrụ nnukwu teknụzụ, elegharala m ihe ndị m kacha hụ n’anya anya! Ruo afọ 5 ugbu a, enyela m ndị ọrụ m ụbọchị m, ehihie na abalị na ngwụsị izu - ma na-arụ ọrụ na blọọgụ m n'etiti. Otu ụbọchị anaghị agafe na enwere m onye ọrụ ma ọ bụ na netwọkụ m na -achọ m enyemaka, ọ masịrị m inye ya. Ọ fọrọ nke nta ka m ghara ịsị mba. Ka m na-ede akwụkwọ a, enyere m otu enyi m nwoke na-eto eto aka ịtọlite ​​nchekwa data MySQL na sistemụ ya XAMPP. M na-atụ anya inyere ya aka karịa na ọbịbịa afọ - ọ rịọrọ m ka m bụrụ onye ndụmọdụ ya maka nnukwu ọrụ ya na-emepe ngwa weebụ.
Emeela m ka ndị niile gbara m gburugburu mara na ọ bụ ya mere m ji nọrọ ebe a na ọ bụ ihe m dị mma. Ọ na-adịkarị obere ka ihe a na-eme ebe m chere na a na-eji m. Ọ ga-abụ oke nsogbu ịgbanwe ndị mmadụ na-atụ anya m. Achọrọ m ịga n'ihu na-enyere aka ebe ọ dị mkpa, mana ọ bụghị n'iji ndụ m.
Mgbe m na-anọghị na San Jose otu afọ gara aga, enwere m obi ụtọ na otu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ si arụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N’abalị ọ bụla, a na-ezukọ n’obodo niile. M gere ntị ka ndị mmadụ na-ekwu banyere ebe ha hapụrụ, ma ọ bụ kelee onye ha hụrụ na di na nwunye izu ole na ole gara aga na mmemme ọzọ. Ọtụtụ ndị folks gara ebe ngosi, ụlọ nri, ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ ọnụ. Indianapolis, dịka m maara, enweghị 'ndụ abalị' ọgbara ọhụrụ. Amaara m na anyị nwere ndị ọrụ SQL, .NET na Flex ebe a na mpaghara mana ndị a bụ yawnathons. Otu ìgwè ndị na-anọdụ n'ime ụlọ na-ele ihe ike Powerpoint (Abụ m otu n'ime ụmụ okorobịa ahụ… Anọ m na-eme ka m nwee ike ịbanye na blọgụ ikike izu abụọ gara aga) enweghị m mmasị.
Nke kachasi m obi ụtọ bụ ịga ụlọ ọgbakọ Indianapolis dị na mpaghara. Ihe nzuzu dị nsọ, m ga-abụ 80 afọ! Isi ihe m na ịkparịta ụka n'socialntanet (n'ezie, ọ bụghị nke mebere) bụ freakin 'Book Club? Ezigbo ndị enyi m Bill na Carla na-akwadebe maka njem ụgbọ mmiri na Europe, m na-achọkwa ịgụ akwụkwọ ụfọdụ. “Towa ka Doug… nke a na-adịghị arụ ọrụ!”.
Ewerela nke a dị ka post 'dara ogbenye' - ọ bụ ihe megidere ya. M na-esetịpụrụ onwe m na blọọgụ m ihe ịga nke ọma. Amachaghị m na m setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ kachasị mma! Oge eruola maka mgbanwe ụfọdụ.
Enwere m ike ijide onwe m ma ghara ịnọ n'ụlọ. Aga m amalite ịrụ ọrụ na nke ahụ ozugbo. Anaghị akwụ m ụgwọ maka abalị na ngwụsị izu ka m wee chee na ọ bụ oge m ga-akwụsị inye ha n'efu. Enweghị email, ọ dịghị akwụkwọ ọzọ. Aga m na-egosi! Aga m na-agba ịnyịnya ígwè m (anyịnya) n'ụtụtụ. Na echi m ga-ahapụ ọrụ n'isi ụtụtụ gaa mụ na ada m oge ụfọdụ! Na… ma eleghị anya, otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ dị nso.